Seranan-tsambo eto Madagasikara:HAHAZO FANITARANA NY AO TOAMASINA SY TOLIARA -
AccueilSosialySeranan-tsambo eto Madagasikara:HAHAZO FANITARANA NY AO TOAMASINA SY TOLIARA
Seranan-tsambo eto Madagasikara:HAHAZO FANITARANA NY AO TOAMASINA SY TOLIARA
07/01/2017 admintriatra Sosialy 0
Laharam-pahamehan’ny fitondrana ny fampandrosoana amin’ny alalan’ny asa atao haingana. Anisan’ny nivoitra tamin’ny lahatenin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin’ny fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao, omaly, teny Iavoloha ny fampandrosoana ara-toekarena maharitra mba ahafahan’i Madagasikara mivelatra amin’ireo firenena vahiny.
Tamin’izany indrindra no nilazany fa mitohy ny asa ary tsy mijanona izany.
Eo amin’izay sehatra ara-toekarena izay indrindra, nambarany fa havaozina sy hahazo fanitarana ny seranan-tsambo lehibe roa eto Madagasikara ka ny ao Toamasina sy ny any Toliara no hahazo izany fanitarana izany aloha ato ho ato.
Noho ny fahatsapan’ny filoham-pirenena ny fahasahiranana amin’ny fivezivezen’ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara no antony nandraisana fanapahan-kevitra amin’ny fanamboarana ireo seranan-tsambo roa ireo. Hitarina sy hamboarina hahazaka sambo goavana sy ahafahan’ireo sambo mpitatitra entana miantsona eto amintsika. Tombony lehibe ho an’i Madagasikara ny fisian’ny seranan-tsambo goavana iraisam-pirenena. Tombony ihany koa ho an’i Toamasina sy Toliara ny fahazoana izany. Anisan’ny mampiroborobo ara-toekarena sy mampandroso ny tanàna mantsy ny fahafahana mandray sy mampihantsona sambo goavana ahafahan’ny entana mivezivezy.
Tsy vitan’izay ihany fa nampanantena ny filohan’ny Repoblika ny amin’ny fitohizan’ny asa efa natomboka amin’ny fanitarana ireo seranam-piaramanidina. Marihina fa nahazo izany fanitarana izany ny seranana ao Ivato sy any Nosy Be. Izany no atao mba tsy hampitoka-monina an’i Madagasikara ary mampivelatra antsika amin’ny any ivelany.